रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरणः कसले के भने ? - Nepal Readers
Home » रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरणः कसले के भने ?
रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरणः कसले के भने ?
राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई गरिएको पक्राउको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस लगायत दलका नेताहरुलाई सरकारको यो कदमलाई ‘गैरकानूनी’ भनेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पक्राउ गरियोः प्रचण्ड
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा नेता झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको आदिवासी जनजाति मगर संघ नेपाल केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तथाकथित राष्ट्रपतिको विरोध गरेकोमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताएका हुन्। ओलीले आफ्ना समूहका नेतालाई पक्राउ गर्न सुरु गरेकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउने प्रचण्डको भनाई छ ।
सरकारले अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो बनायोः रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेता झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको टिप्पणी गरेका छन् । झाँक्रीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताएका हुन् । नेता पौडेलले लेखेका छन् ‘संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै सरकारले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको छ । हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा बोल्नै नपाउने भन्ने होइन ।’
सरकारको काल आएकै हो : डा. बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै संविधानको उल्लघंन गरेपछि किन नबोल्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले ट्विट गर्दै भनेका छन् ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता”दिन्छ !” संविधानको पालन र संरक्षण” गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि किन नबोल्ने ? यो सरकारको काल आएकै हो ? उनले नेपालको संविधानमा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ र ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरिएका पृष्ठ पनि पोष्ट गरेका छन् ।
सरकार, झ्यालखानाको संख्या बढाऊ : गगन थापा
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेता झाँक्रीको पक्राउको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले झ्यालखानाको संख्या बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले ट्विट गर्दै सत्यको पक्षमा बोल्नेको मुख सरकारले देखाएको त्रासले बन्द नहुने भन्दै झ्यालखानाको संख्या थप्न सुझाएका हुन् । उनले राष्ट्रपति ‘महाराज’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेता झाँक्रीले दुई साताअघि गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनलाई बिहीबार दिउसो शंखमूलस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको छ । उनलाई राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गतको दफा ५८ को कसुरको अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक प्रयत्नप्रति सर्वोच्चको पाठ
चिनियाँ चमत्कार विश्वको गरिबी निवारण गर्न सहयोगी हुने